‘आत्मनिर्भर वडा बनाउँछु’::Online News Portal from State No. 4
साविकको लेखानी गाविस जिल्लाकै चर्चित ठाउँ हो । जिल्ला सदरमुकामबाट टाढा रहेकाले यहाँ विकास निर्माणका कामहरु केही सुस्त भएपनि पछिल्लो समय देश संघिय संरचना गएपछि काठेखोला गाउँपालिका–८ मा परिणत भएको लेखानीमा विकास निर्माणका केही कामहरु सुरुवात भएका छन् । प्रायः स्थानीय तहमा निकै कम उपस्थिती रहेको महिलाको उपस्थितीलाई लेखानीले प्रतिनिधित्व गरेको छ । झण्डै डेढ बर्ष पहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ महिला नेतृ जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । भौगोलिक जटिलताका बिचमा पनि यहाँ भैरहेको प्रगतिले महिलाको नेतृत्वमा कामले सफलता पाउँछन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गरेको छ । लामो समयपछि भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा पूर्व नेकपा एमेलावाट उम्मेदवार बनेकी महिला नेतृ चित्रकला छन्त्याल काँग्रेसको बाहुल्य रहेको लेखानीमा निर्वाचित भएपछि भएका काम र बनेका योजनाको बिषयमा हामीले केलाउने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ चित्रकलाको डेढ बर्षे कार्यकालको बिषयमा हाम्रा सहकर्मी योगेश खड्काले गरेको छोटो सम्वाद ।
–काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं । तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन् । जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । म नेतृत्वमा आएपछि गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बिकासे कामका लागि सुरु सुरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न र योजनामा अलि विवाद देखिए, समाधान गर्न केही गाह्रो भने अवस्य भएको थियो । तर पछि समिति गठन गर्न प्रकृयामा देखिएको समस्या सामाधान गर्न सफल भयौ । त्यस्तै वडा कार्यलयमा सचिव र कार्यलय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन । केही काम सिक्दै र केही अनुभव हरुलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन् ।
निर्वाचित भईसकेको २० महिना पुगी सक्दा जनताले महसुस गर्न काम के के गर्नु भयो ?
–पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं । म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो । पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमीकतामा राखेर काम गरेका छौं । अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो । स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन् । हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं । कयौं कामहरु भएका छन्भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । म वडाध्यक्ष भएको कार्यकालको सुरुमा २० लाख जति बजेट सडकको स्तरोन्नति लागि खर्च गरीयो । गाउँपालिकाबाट बिनियोजन भएको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास मैले गरेँ । त्यस बजेटले पहिलो वडाको ९ देखी १० किलोमिटर जति सडक सुधार तथा नाली बनाउने काममा खर्च गरियो । कादेश र लेखानी जोड्ने झोलुङगे पुलको निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी उक्त झोलुङगे पुल निर्माण गर्न टेन्डर प्रकृयामा सुरु भैसकेको छ । लेखानीको कादेशमा नेवा संस्थाले खानेपानीको सुधारको लागि पहिले देखिनै विभिन्न योजनाहरु ल्याएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा हामीले खासै पानीको समस्या देखेका छैनौं । वडाका अरु क्षेत्रमा भने ५ देखि ७ घरले एउटा धारा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो समस्या समधानको लागि एक घर एक धाराको योजना छिट्टैनै सबैको घर–घरमा पु¥याउने योजना अगाडी बढाउन भरसक प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वडा कार्यलयमा नै कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले कयौं साना कामहरु गरेका छौं जुन कामहरु प्रत्यक्ष जनताको जिविकासँग जोडिएका छन् । कार्यालयमा सम्पादन हुने कामहरुमा पनि सुधार आएको छ ।
वडा कार्यलयमा कर्मचारीहरु नहुने, कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने जस्ता समस्या देखिन्छन् तपाईको वडा कार्यलयमा त्यस्तो के छ ?
–वडा अध्यक्ष भएपछिको एक दिनको कुरा हो म कामले वडा बाहिर जानु पर्ने काम थियो । म नै बाहिर भएपछि मेरो कार्यवाहक जिम्मेवारी अर्को सदस्यलाई सुम्पिएर कार्यवाहक जिम्मेवारी दिई गएको थिएँ । तर वडाका जनताले कार्यवाहक जिम्मेवारी आधिकारिक रुपमा जनताले लिन मानेन् । यस प्रकारको समस्या दुई पटकसम्म आएको थियो । तर पछि गएर वडाका जनतालाई कार्यवाहकले राम्रो सँग जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने भन्दै जनतालाई विश्वास दिलायौं । त्यो बाहेक कार्यालयका काममा हाम्रोमा समस्या छैन् । हाम्रो वडा कार्यलयमा जनताले गुनासो गरेको प्रमुख समस्या भने यहिँ मात्रै थियो । तर त्यस समस्यापछि सचिव नहुने, अध्यक्ष नहुने, कार्यालय नखुल्ने जस्ता समस्या भने हाम्रो वडा कार्यलयमा छैन् । यस प्रकारको समस्या नओस् भनेर पनि हामी पूर्ण रुपमा जनताको सेवाको लागि कार्यालयमा सार्वजनिक छुट्टी बाहेक सधैभरि उपस्थिती हुने गरेको छौँ । कर्मचारी र हाम्रो उपस्थिती नभएका कारणले काम नभएको वा सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्ने गुनासो छैन् ।
हजुरको क्षेत्रको विकासको लागि गाँउपरिषदबाट के–के योजना अगाडी सार्नु भएको छ त ?
–हामीले यस पटकको गाउँ परिषदमा मुख्य रुपमा उठाएको प्रसंग स्वास्थ्य क्षेत्रको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या रहयो भने हरेक क्षेत्रमा समस्या कायम रहन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधारमा हमीले बिषेश ध्यान दिएका छौं । अहिले हाम्रो वडाको स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकको अभाव छ । स्वास्थ्यचौकी भएर पनि सामान्य उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि हामीले गाउँपालिकासँग चिकित्सक मागेका छौं । पहिले रहनु भएको अनमी सरुवा भएपछि अहिले गर्भवती महिलालाई गर्भ जाँच लागि बागलुङ बजार अथवा पोखरासम्म पु¥याउनु पर्ने समस्या वडामा छ । यस समस्या समधानको लागि वडामा अनमी उपलब्ध गराउने भनी उपल्लो तहमा सिफारिस गरेको छांै । सोही मागअनुसार केही हप्ताभित्र स्वास्थ्य चौकीमा अनमी उपलब्ध गराउने भनी गाँउपरिषदबाट मागको सम्बोधन गरीएको छ । हेरौ के हुन्छ । वडामा रहेका खानेपानीदेखि कृषि लगायको क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानको लागि भावी योजनाहरु गाँउपरिषदमा पेश गरेकी छु । हामीलाई आवश्यकता धेरै छन् । उपलव्धता कम हुनुका कारणले सबै कुरा नपुग्ला तर परिसदले न्यायीक निर्णय गर्छ र काममा सहजता हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
–काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं । मेरो कार्यकालमा वडामा खनेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पु¥याउने योजना रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र गाँउघरमा उत्पादन भएका बस्तुहरु बाहिर निर्यात गरी गाँउमा नै रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएकी छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ ।
अन्त्यमा यस अनलाईन पत्रपत्रिका मार्फत केही भन्नु छ कि ?
–सर्वप्रथम त तपाँईको पत्रिका र तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियामार्फत मेरा वडामा अहिलेसम्म भएका विकास, भावी योजना र चुनौतीहरु जनता सामु ल्याउने मौका पाएको थिएन । आज यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा विशेष धन्यावाद । वडामा काम गर्दा आई परेका समस्यामा हातेमालो गर्ने सहकर्मीहरु, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्पुर्ण वडाबासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रचनात्मक सहयोगका लागि सधै अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।